Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Lufthansa Group ụgbọ elu ịgbanwe nkpuchi chọrọ
Airlines • Austria na -agbasa ozi ọma • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Akụkọ Ahụike • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa ozi Switzerland • Tourism • Transportation • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Ndị ụgbọ elu Lufthansa Group ewebatalarị ihe achọrọ iji tinye ihe mkpuchi imi n'ọnụ ụgbọ elu ha na Mee nke afọ gara aga
Ftgbọ elu Lufthansa Group na-ewebata ihe chọrọ iji eyi mkpuchi mkpuchi ahụike na ụgbọ elu ha na-esi na Germany. Usoro a malitere ịdị na February 1. Site na ụbọchị ahụ, ndị njem ga-achọ iyi akwa mkpuchi ma ọ bụ mkpuchi FFP2 ma ọ bụ nkpuchi na ọkọlọtọ KN95 / N95 n'oge ịbanye, ụgbọ elu na mgbe ị na-ahapụ ụgbọ elu ahụ. A naghị ekwe ka mkpuchi ihu ụbọchị ọ bụla.
Gbọ elu nke Lutù Lufthansa enwetalarị ihe achọrọ iji tinye ihe mkpuchi imi n'ọnụ ụgbọ elu ha na Mee nke afọ gara aga, na-eme ka ha bụrụ otu n'ime ndị ọsụ ụzọ n'ụwa niile. Site na ịmegharị iwu ahụ, ndị otu Lufthansa na-ewerezi mkpebi nke gọọmentị etiti na nke steeti nyere na Germany na Jenụwarị 19. Nke a pụtara na iwu ndị edo edo na-emetụta usoro njem niile.
Iji mee ka ndị njem nwee ike imeghari na iwu ọhụrụ ahụ n'oge dị mma, a ga-agwa ha site na e-mail na ọdụ ụgbọ elu na ọdụ ụgbọelu na-elekọta mmadụ.
Dị ka ọ dị na mbụ, enwere ike ịhapụ ibu ọrụ iyi mkpuchi imi n'ọnụ n'oge ụgbọ elu maka ihe gbasara ahụike ga-ekwe omume naanị ma ọ bụrụ na enyere akwụkwọ ahụike na mpempe akwụkwọ Lufthansa nyere na nke adịghị mma Covid-19 ule dịnụ nke na-erughị awa 48 na mmalite nke njem ahụ.
Onwere, ọrịa na osisi bụ nnọọ eleghi anya. All ụgbọ elu Lufthansa Group nwere ihe nzacha ikuku kachasị elu, nke na-eme ka ikuku dị ka nke dị na ihe nkiri ihe nkiri. Tụkwasị na nke ahụ, ikuku na-ekesa n'ụzọ kwụ ọtọ kama ịchụsasị ya n'ime ụlọ ahụ.